How to Report Fake Account ...? | Online Service Center Myanmar -->
How to Report Fake Account ...?
How to Report Fake Account ...? ( ကိုယ့်ပုံ or ကိုယ့်နာမည် နဲ့အကောင့်တုကို Report လုပ်နည်း )
မကြာခဏ လာလာမေးကြတာလေးမို့ Public Post အနေနဲ့
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ Group တွေထဲမှာရော
Message တွေကနေပါ Report ပြုလုပ်နည်း ပေါင်းစုံကို Sharing
လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အခုကတော့ တစ်နေ့တစ်ခြား များပြားလာတဲ့
PA ( Personal Attack ) ပြုလုပ်သူတွေလက်ချက်ကြောင့် Fake Account တွေများစွာနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းအောင်ပြုလုပ်မှုတွေ၊ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ၊
ငွေညှစ်မှုတွေ မြင့်တက်လာနေတာတွေ့ရလို့ ကိုယ့် အကောင့်ကို တုပပြီး
အသုံးပြုနေတဲ့ Account တစ်ခုကို Report ပြုလုပ်နည်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Report ပြုလုပ်နည်းတွေကို Facebook က Help Center မှာ အသေးစိတ်
ပြောပြထားပေမယ့် မည်သူမှ ဝင်ဖတ်ကြဟန်မတူဘူး။ တစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်
အစ်ကိုရေ... ညီမ၊ အစ်မ၊ အစ်ကိုအကောင့်၊ ညီ့အကောင့် ကို ပုံစံတူလုပ်ပြီး
အကောင့်တုဖွင့်ထားတယ်။ အဲ့ဒါလေး Report လုပ်ပေးပါဦးဆိုပြီး အကူအညီ
လာလာတောင်းကြတာများတယ်။ ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါ ကိုယ်တိုင်လုပ်တာက
ပိုပြီးတော့ ထိရောက်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင် မလုပ်တတ်လို့ပါကူညီပါဦးလို့
အမြဲပြောကြတယ်။ ဘယ်လုပ်တတ်ကြပါ့မလဲ လေ့လာကြပါလို့ပြောပေမယ့်
ခွေးဖင်ပူးတာလောက်တောင် စိတ်မဝင်စားတော့ မလေ့လာကြဘူး
အဲ့ဒီတော့ မလုပ်တတ်တာက မဆန်းဘူးပေါ့။
အဲ့လိုမျိုးလူတွေ နောက် လာလာမမေးတော့အောင်လို့အခု တစ်ခါထဲ Public Post အနေနဲ့တင်ပေးထားလိုက်ပါတယ်။ Save လုပ်ပြီးပဲ သိမ်းသိမ်း SS ထဲမှာပဲ သိမ်းသိမ်း Note ထဲမှာပဲ ကူးပြီး သိမ်းသိမ်း သိမ်းချင်သလိုသာ သိမ်းထားကြပါ။ တစ်နေ့မဟုတ် တစ်နေ့လိုအပ်လာရင် အသုံးပြုလို့ ရအောင်လို ့ပါ။
မိန်းကလေးတွေ တော်တော်များများက သူတို့ပုံတွေနဲ့အကောင့်တုတွေ ပေါ်လာရင် သို့မဟုတ် PA လုပ်တာတွေ ကြုံလာရင် ပြာပြာသလဲဖြစ်ပြီး ဘာလုပ်လို ့ဘာကိုင်ရမှန်းမသိဖြစ်ကုန်ကြတာများပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ဖြစ်လာရင် ရှက်နေဖို့၊ ကြောက်နေဖို့မလိုပါဘူး။ ရှက်နေ၊ ကြောက်နေရင် တစ်ဖက်လူအကြိုက် ဖြစ်သွားပါမယ်။ အဲ့ဒီလို ကြုံတွေ့လာရင် ကိုယ်တိုင်လည်း Report လုပ်ပါ။ သူငယ်ချင်းတွေ မိတ်ဆွေတွေကိုလည်း အကူအညီတောင်းပြီး Report လုပ်ခိုင်းပါ။
အခုတော့ ဒီနည်းလေးကိုမှတ်ထားပြီး ဒီနည်းတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါ။
1. Report ကို နှိပ်
2. Report this profile ကိုရွေး Continue ကို နှိပ်။
3. They're pretending to be me or someone I know ကိုရွေး Continue ကို နှိပ်။
4. Me ကိုရွေး Continue ကို နှိပ်။
5. Submit to Facebook for Review ကို နှိပ်ပြီး Done ကို နှိပ်။
3. This isafake account ကိုရွေး Continue ကို နှိပ်။
4. Submit to Facebook for Review ကို နှိပ်ပြီး Done ကို နှိပ်။
2. Recover or close this account ကိုရွေး Continue ကို နှိပ်။
3. Close this account ကို နှိပ်ပြီး Done ကို နှိပ်။
ကိုယ့်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ကိုယ်နာမည်နဲ့ အကောင့်တုကို အပေါ်ကနည်း ( ၃ ) မျိုးနဲ့ပဲထုပေးလိုက်ပါ။ မြန်ရင် ချက်ချင်းကျသွားနိုင်သလို ကြာရင် ၁ ရက် ၂ ရက်လောက်ထိ ကြာတတ်ပါတယ်။ Facebook team ကတော့ Review ကို Report တင်ပြီး 15 မိနစ်ကနေ နာရီဝက် ၁ နာရီလောက်နေရင် လုပ်တတ်ပါတယ်။
သူတို ့စစ်ဆေးပြီးလို့ ပေါ်လစီကို ချိုးဖောက်ထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရင် အဲ့ဒီအကောင့်ကို ပိတ်ချပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့် Photo ကို ယူသုံးထားပြီး နာမည်က Fake Name အသုံးပြုထားတယ်ဆိုရင်တော့ Fake Name နဲ့ပါ Report ထပ်လုပ်လို့ ရပါသေးတယ်။
ကိုယ့် အကောင့်တုမှ မဟုတ်ပါဘူး ဒါတွေကိုလည်း ဒီနေရာ => http://bit.ly/ReportTools_1 မှာ သွားရောက်ပြီး Report ပြုလုပ်လို့ရပါသေးတယ်။
( တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့် Email or Phone Number ကို သူ့အကောင့်ထဲမှာ ထည့်ပြီးသုံးနေတယ်ဆိုရင် )
( တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း ပုံစံတုပပြီး အကောင့်တု ဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင် )
3. Someone created an account pretending to be me orafriend
( တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်အကောင့်တု သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ယောက်ပုံစံမျိုးနဲ့အကောင့်တုဖွင့်ပြီးသုံးနေခဲ့တယ်ဆိုရင် )
Report Tools ( Contacts Forms ) Link => http://bit.ly/ReportTools_1
အပေါ်က Link မှာ ဝင်ရောက်ပြီး Report ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။
Aung Kyaw Soe ( 28.12.2017 - 2:30 PM )
#AKS , #AKS_Sharing
OSC-Myanmar အနေနဲ့ အခကြေးငွေဆိုတာထက်
အကောင်းဆုံး Service ပေးနိုင်ဖို့ကိုပဲ အမြဲတမ်း
Admin Team အနေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို
အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။
Online Shopping လုပ်​​နေလို့ Boost ကို ကိုယ်​တိုင်​ပြုလုပ်​ချင်​တယ်​ဆိုသူများအတွက်​ Boost ပြုလုပ်​နည်​းများကို ​စျေးနှုန်​းချိုသာစွာဖြင်​့ အ​ကောင်​းဆုံး သင်​ကြားပြသ​ပေး​နေပါပြီ။
Boost ​တွေ Run လို့မရ​တော့ဘူး Error ​တွေ တက်​​နေတယ်​။ Bank Card ​တွေလဲပြုတ်​​နေပြီ ကတ်​အပိတ်​ခံရတာလားမသိဘူး ဘဏ်​ကတ်​အသစ်​ပဲ ပြန်​​လျှောက်​ရမလားမသိဘူး။ Page Like ကအများကြီးပဲ Boost Run လို့မရ​တော့ဘူးဆိုပြီး စိတ်​ညစ်​​နေသူများအတွက်​ Error fix ​ပေးတဲ့ Service လည်​း​ပေး​နေပါတယ်​။
Boost ပြုလုပ်​ချင်​တယ်​ ကိုယ်​တိုင်​​တော့ မလုပ်​​တော့ဘူး Service ပဲ အပ်​ချင်​ပါတယ် ဆိုတဲ့သူများအတွက်​လည်​း Boost ပြုလုပ်​​ပေး​နေပါတယ်​။ စီးပွား​ရေးလုပ်​ငန်​းများ၊ ထုတ်​ကုန်​များကို လူအများအပြားဆီကို တခဏအတွင်​း​ရောက်​ရှိဖို့ Boost Service ပြုလုပ်​​ပေး​နေပါတယ်​။
ဒါ​ကြောင်​့ ဘာအတွက်​ပဲဖြစ်​ဖြစ်​ လိုအပ်​ပါက ဆက်​သွယ်​နိုင်​ပါသည်​။
#Boost_Training ( Boost ပြုလုပ်နည်းသင်တန်း ) တက်ချင်တယ်။
#Boost_Error ​တွေလည်​း ရှင်​းချင်​တယ်​။
ဆိုပါလျှင်.... အောက်ပါ ဆက်သွယ်ရန်များမှာ ဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
- Aung Kyaw Soe
Viber - ‎‎‎09421157911
Viber Public Chat - www.viber.com/OSC-Myanmar
သိရှိသွားအောင် ပြန်လည်ပြီး #Share လုပ်ပေးလိုက်ကြပါဦး။